Tag: nweta vidiyo siri ike | Martech Zone
Tag: nweta vidiyo siri ike
Lithium Na-ebupụta Ihe Dị Oké Mkpa Banyere Ahụhụ
Monday, September 9, 2013 Na Tọzdee, Septemba 10, 2013 Douglas Karr
Lithium ebidola usoro ihe nkiri vidio na microsite ohuru, Gosi ezigbo ihe gbasara mmekọrịta ọha na eze ka ị nwee obi ụtọ na Social Media wee nye ụfọdụ akwụkwọ akụkọ na-enye nkọwa iji nyere ụlọ ọrụ aka na usoro mgbasa ozi mmekọrịta ha. Ihe gunyere bu nyocha onwe onye. Vidio ndị ahụ gụnyere: Ọrụ Ndị Ahịa na Social Media Ihe Mmasị na-eme na Nsonaazụ Azụma Nnukwu Data Na Lithium na-etinye nwamba… iji mee ka ụlọ ọrụ na-eji nwamba Did Lithium mee ihe ọchị
Tinye aka! Iwu ahia na Social Media
Monday, June 7, 2010 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Kemgbe ọnwa gara aga, a na m agụ Engage: Ntuziaka zuru ezu maka ụdị na azụmaahịa iji wuo, zụlite, ma tụọ ihe ịga nke ọma na ntanetị ọhụrụ. Nke a abụghị ihe ọkụ ọkụ - ntuziaka zuru oke nwere ike ịbụ okwu ekwesighi! Ọ bụ akwụkwọ ịchọrọ ịnọdụ ala, tinye uche na ya n'otu n'otu n'otu oge. Brian ejirila akwụkwọ a mee ihe - ọ bụ ihe zuru oke ma nwee ike ikpuchi ihe niile gbasara akara, ihe